मत तान्न अझै किन महत्त्वपूर्ण छन् मोदी ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मत तान्न अझै किन महत्त्वपूर्ण छन् मोदी ?
बीबीसी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी-बीजेपीले उसको राजनीतिक प्रभाव निरन्तर रूपमा बढाइरहेको देखिन्छ। दक्षिणी राज्य कर्नाटकमा हालै भएको विधानसभा चुनावमा मोदीको दल सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदाएको छ।
भारतका २९ वटा राज्यमध्ये २० वटा राज्यमा बीजेपीको सरकार छ र अब २१औँ राज्यको सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने दाबी पनि उसले गरेको छ।दुई अन्य दलहरू कंग्रेस तथा क्षेत्रीय पार्टी जनता दल (सेक्युलर)ले अन्तिम समयमा आएर एकअर्कासँग चुनावपश्चात् गठबन्धन गर्ने घोषणा गर्दै स्थितिलाई नयाँ मोड दिए।
गठबन्धनले उनीहरूलाई सत्तामाथि उचित दाबी गर्ने मौका दिएको पनि ती दुई दलहरू बताउँछन्। कांग्रेस तथा जनता दलले ११४ सिट हासिल गरेका छन् भने बीजेपीसँग १०४ सिट छ। अब कर्नाटक राज्यमा त्यहाँका राज्यपालले कसले त्यहाँ सरकार गठन गर्नेछ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सामान्य बहुमत पाउनबाट बीजेपी ८ सिटले मात्र पछि परेपनि मोदी चुनावी परिणामबाट निकै नै खुसी देखिन्छन्।
गत एक वर्षमा बीजेपीले भारतका ग्रामीण उत्तर-पूर्वमा अनपेक्षित रूपमा प्रभाव बिस्तार गरेको छ। त्यो क्षेत्रमा २५ वटा संसदीय सिटहरू छन्।
पाँच वटा दक्षिणी भारतीय राज्यहरूमा अहिलेसम्म केही सफलता नपाएको बीजेपीले ६ करोड ४० लाख जनसंख्या भएको कर्नाटकमा राम्रो चुनावी परिणाम ल्याएको छ। अघिल्लो सरकारमा मन्त्री रहेका कंग्रेसका एक दर्जनभन्दा बढी नेताले उनीहरूको सिट गुमाएका छन्। यसको अधिकतम श्रेय मोदीलाई नै जान्छ।
एकदमै आक्रमक अभियानका क्रममा, निकै मिहिनेती भनिने नेता मोदीले २० भन्दा धेरै सार्वजनिक बैठकहरू गरे। साथै लोकप्रियवादी क्षेत्रीय नेता तथा कांग्रेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका सिद्धरमैयाविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिएको देखियो।
मोदीले भ्रष्टचारका विरुद्ध लड्ने अनि अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने कुरा गरे जबकि उनका दलका अन्य नेताहरूले धार्मिक मुद्दा उठाए। चुनावी नतिजाले फेरि पनि मोदी अझै पनि उनको दलको सबैभन्दा महत्तवपूर्ण व्यक्ति हुन् भन्ने पुनः प्रमाणित भएको छ। राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको कांग्रेसका लागि चुनावी हार एउटा ठूलो बाधा भन्न सकिन्छ।